Kedu otu esi emewanye ọkwa gị ma bulie ọnụahịa ị na-eji Amazon Rank Tracker?
Amazon keyword rank tracker bụ a bara uru online ngwanrọ nke e mere iji nyere webmasters-alụ ọgụ na nke a trading n'elu ikpo okwu. Ọ na-enye ohere iji kwalite ngwaahịa Amazon na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa kwa ụbọchị na iwelie olu ahịa.
I kwesiri iji ngwá ọrụ a mee ihe mgbe nile iji meziwanye akara gị na Amazon. Ị ga-anọgide na-edekọ isiokwu gị ezubere iche maka ịkwado ma wusie ike gị - gold coloured wedding hats. Ngwá ọrụ Amazon tracker na-ewepụta nsogbu niile site na ịmepụta usoro nke isiokwu ọnọdụ. Ọ dị gị mkpa iji oge dị ukwuu na-achọpụta usoro okwu ọchụchọ na nhazi data. Omume niile a ga-eme na-akpaghị aka n'ime obere oge. Ọchụchọ Amazon nyochaa ọkwa gị ugboro ugboro kwa ụbọchị, na-enye gị ozi kachasị mkpa na nke emelitere. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịmara ebe ị ga-adị mgbe ị na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịrụ ọrụ n'okpuru mmelite ha. Ma ọ bụ ọ bụrụ na i nweela ọkwa kachasị elu na SERP Amazon, ị nwere ike ịrụ ọrụ na ogo maka okwu ọchụchọ ọzọ, na-amụba ohere nke ngwaahịa gị na-egosi na nsonaazụ ọchụchọ.
Nke ahụ bụ ihe kpatara ya site n'iji Amazon na-achọpụta tracker, ị ga-abụ otu nzọụkwụ n'ihu ndị na-asọ gị.
Gini bu uru kachasi uru nke Amazon tracker?
Ị maara ọkwa nke ugbu a dị na ya
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta na Amazon, ịkwesịrị ịma ngwaahịa gị ugbu a ọnọdụ. Data a nwere ike inyere gị aka imeziwanye ọnọdụ Amazon gị ma mee ka ndị ahịa gị nwee ike ịchọta ụdị gị.
Ị nwere ike soro mgbanwe na ọkwa
Ngbanwe ọ bụla na ọkwa na-egosi na ihe mere na akara gị. O nwere ike ịbụ ma ọ bụ ibelata ma ọ bụ bukwuo ibu n'àkù Amazon gị nke ị ga-eme ozugbo. Amazon ọnọdụ tracker na-enye gị niile data a na-enye gị ohere iji ezubere iche ime iji melite gị rankings ọnọdụ ozugbo.
Usoro ọchụchọ ọhụrụ
Ngwaọrụ a na-enye gị ohere ịgbakwunye usoro ọchụchọ ọhụrụ gị na usoro ma nyochaa ikike ha nwere maka icheta ha na ndepụta Amazon gị. Amazon ọnọdụ tracker ga-egosi gị olu ọchụchọ maka isiokwu ọ bụla echebara isiokwu, na-enye gị ohere ikpebi ma ọ bụrụ na ọ bara uru iche ma ọ bụ. Nnukwu ọchụchọ ọchụchọ nke isiokwu a pụrụ iche nwere ike igosi ma - oke asọmpi na ewu ewu n'etiti ndị ọrụ. Dị ka a na-achị, ọ dị oke mgbagwoju anya ịkwado elu maka isiokwu dị elu, ma ọ ga-aka mma ka ị tụlee uche gị na obere okwu asọmpi nke pụkwara ịbata na TOP nke nsonaazụ ọchụchọ.
Na-eduzi nyocha ịsọ mpi na otu igodo
Ngwaọrụ a na-enye ndị ahịa Amazon aka ịgbaso ndị asọmpi nwere ike ịme ndị omempụ.Ịnwere ike ịgbakwunye otu n'ime isiokwu ndị ọkachamara gị na-asọpụrụ, jiri ya tụnyere otu ihe ahụ dị ka nke gị ma hụ otú ha si ebuli. Ọ bụrụ na ị maghị ihe isiokwu gị ndị na-asọmpi na-eji na-ebuli site na, ị nwere ike ịlele ha ngwaahịa aha na nkọwa.